Nageenya Oromiyaa: Waa'ee qondaalaa nageenyaa Naqamteetti ajjeefamanii waan beeknu - BBC News Afaan Oromoo
Nageenya Oromiyaa: Waa'ee qondaalaa nageenyaa Naqamteetti ajjeefamanii waan beeknu
Image copyright Waajjira Komunikeeshinii Naqamtee
Goodayyaa suuraa Magaalaa Naqamtee
Hogganaan duraanii Waajjira Dhimma Bulchiinsaa fi Nageenyaa magaalaa Naqamtee Obbo Tashooma Gannatii ajjeefamuu isaanii maddeen BBC'f mirkaneessaniiru.
Namni kun guyyaa har'aa waaree booda naannoo mana jireenyaa isaaniitti daandii irratti rasaasaan dhahamanii akka ajjeefaman BBC'n odeeffateera.
Eenyuun akka ajjeefamaniifi ajjeechaa isaanii kanaaf maaltu sababa akka ta'e wanti beekame hin jiru.
Obbo Tashoomaan A.L.I bara 2007 fi 2008 waggoota lamaaf Magaalaa Naqamteetti bulchaa kutaa magaalaa Calalaqii turan.
Sana booda hogganaa Waajjira Hawaasummaa fi hogganaa itti-aanaa Waajjira Bulchiinsaa fi Nageenyaa magaalattii ta'anii hojjetaniiru.
Bara darberraa eegaluun hogganaa Waajjira Bulchiinsaa fi Nageenyaa magaalattii ta'anii erga hojjetaa turaniin booda, ji'a tokko dura hoggansa irraa kaafamanii ramaddii biraa eeggataa akka turan BBC'n odeeffateera.
'Ilmakoo konkolaataa jala naannessanii rasaasaan ajjeesan'
Namni umuriin isaanii ganna 35-40 tilmaamamu kun bultii ijaarratanii ijoollee lamas horataniiru.
Ajjeechaan qondaala nageenyaa duraanii kun wayita sababa koronaavaayirasiif bilbilliifi intarneetiin Lixaafi Kibba Oromiyaatti adda citee ture akka deebi'u mootummaarratti dhiibbaan taasifamaa jirutti raawwate.
Intarneetii fi bilbilli kan adda citeef rakkoo nageenyaa naannoo sana jiruun wal-qabatee ajjeecha irra deddeebiin aanga'oota mootummaa irratti raawwatamaa tureefi miidhaa hawaasarra gahaa jiru ittisuufi jedha mootummaan.
Hoggannaa Itiyoo telekoom damee Lixaa Obbo Gammachis Taaddasaa, Itti-gaafatamaa qorataa yakkaa magaalaa Naqamtee komaandar Caalaa Dagaagaa, Direektara Humna Namaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Obbo Darajjee Olaanaa dabalatee namoonni kaanis bara darbe magaalaa Naqamteetti ajjeefamaniiru.
Kana malees godinaalee Lixa Oromiyaa biroo keessatti yeroo adda addaa aanga'oonni mootummaa hedduun ajjeefamanii jiru.
Mootummaan namoota ajjeefaman kanaaf waraana hidhatee bosonatti hafe himata.
Jireenyi Naqamteetti komaand poostii jalatti maal fakkaata?
BBC'n dhimma ajjeechaa Obbo Tashoomaa irratti odeeffannoo dabalataa argachuuf aanga'oota mootummaa sadarkaa magaalaa hanga Naannoo jiran qunnamuuf yaalus odeeffannoo wayyabaa argachuu hin dandeenye.
Hogganaa itti aanaan Biiroo Dhimma Bulchiinsaa fi Nageenyaa Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu rukutamuu isaa akka dhagahan garuu odeeffannoo dabalataa biraa akka hin qabne BBC'tti himan.
Dubbi himaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa ajjeechaan kun raawwachuu isaa mirkaneessanii, qorannoon eegalamu isaa FM Shaggaritti himaniiru.
'Ilmakoo konkolaataa jala naannessanii rasaasaan ajjeesan' Obbo Misgaanuu Lammii
4 Guraandhala 2020
Tiraamp 'torbee hamaan' nu dura jira jechuun akeekkachiisan
Keeniyaatti qondaalli mootummaa biyya alaatii yoo galan addatti tursiifamuu diduun hidhaman